Izipikha eziphathwayo ezingenazingcingo eziphathwayo (2021)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Izipikha zeBluetooth ezingenazingcingo eziphathwayo (2021)
Izithethi zeBluetooth zizixhobo ezimangalisayo! Ziyahluka ngokobukhulu ngokobukhulu, imilo, imibala kunye namaxabiso, kwaye ngaphandle kokuba uyinyikimisile enye yeefayile ze- Iifowuni ezinezona zithethi zibalaseleyo Ngaphandle, nesona sithethi sincinci seBluetooth sinokuba luphuculo olubalulekileyo kwisandi osifumana kwi-smartphone yakho.
Ngeebhetri ezihlala iiyure ezininzi, izithethi zeBluetooth zinokubaluleka ekuziseni uhambo lwenkampu okanye ukonwabela umculo nje ngasemva. Iimarike zizele ngamanzi ngamakhulu eemodeli ukuze ukhethe enye kunokuba nzima. Kungenxa yoko le nto siye sakhetha ezona zithethi zeBluetooth ziphatheka ngoku zaza zahlulahlulwa zangamacandelo amathathu amaxabiso. Sinezipikha ezincinci, izithethi ezincinci kunye nezo zinokubizwa ngokuba ziyaphatheka, kodwa sihambise isandi esipheleleyo, esona sikhulu.
Ke, uluhlobo luni lwezithethi zeBluetooth okhoyo kwimarike kwaye yeyiphi oyifunayo? Masikhe sijonge ezona ndlela ...
Intloko! Ngaba uyafuna ukufumana ezinye zezona zithethi zeBluetooth zibiza ixabiso eliphantsi? Jonga ifayile Eyona misebenzi ibalaseleyo yesithethi seBluetooth yeAmazon 2021 !
Ezona zithethi zingenazingcingo zeBluetooth, uluhlu olushwankathelwe:
Izithethi zeBluetooth ze- $ 100 okanye ngaphantsi:
I-JBL Clip 3
IBose Soundlink Micro
I-Anker Soundcore Flare 2
Izithethi zeBluetooth ukusuka kwi- $ 100 ukuya kwi- $ 200:
Ibetha iPilisi +
I-Bose SoundLink Mini 2
Izithethi zeBluetooth ezingaphezulu kwe- $ 200:
UMarshall Kilburn 2
Izithethi zeBluetooth ze- $ 100 okanye ngaphantsi
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezili-10
I-JBL Clip 3 yinxalenye yecandelo lezithethi zeBluetooth eziphathwayo. Ayinamandla ngokwaneleyo kwitheko lendlu, kodwa wena & ampos; uya kuhlala uyibona ixhonywe ebhegini yomntu ojikelezayo okanye ohamba ngebhola ekhatywayo. I-IPX7 ingena manzi, incinci, kwaye ine-carabiner eyakhelweyo, eyenza ukuba ibe liqabane elifanelekileyo kwimisebenzi yangaphandle.
Ngaphandle komzimba odibeneyo, esi sisisithethi seJBL, ke lindela ukuba ungothuka xa usiva okokuqala ngqa.
Thenga i-JBL Clip 3 kwiAmazon.com
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezili-13
Mhlawumbi ngaphezu kwayo nayiphi na into, iWonderboom 2 iyaphumelela ngenxa yokuba ithembeke kangakanani. Ingasinda kwithontsi ukuya kuthi ga kwiinyawo ezintlanu, iya kudada ngokukhuselekileyo endaweni yokuntywila ezantsi echibini, kunye neempawu ezinje ngemowudi yezithethi ezininzi zihlala zifikeleleka ngokulula, ngaphandle kokunyanzela abasebenzisi ukuba bakhuphele usetyenziso olongezelelekileyo. Thatha nje uhamba nayo, kwaye umculo uyalandela. Kwaye, ijongeka intle!
Thenga i-UE Wonderboom 2 kwiAmazon.com
I-Bose SoundLink Micro
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezingama-6
UBose ujoyina isithethi esincinci seBluetooth ngesandi sayo seSandiLink. Kuza nenqanaba le-IPX7 lokumelana namanzi kwaye kukhanya ngokwaneleyo ukuba kunganqunyulwa phantse kuyo nantoni na. Xa kuthelekiswa nezithethi ezibini ezidlulileyo, nangona kunjalo, ubomi bebhetri bufutshane kwaye awuzukufumana usuku olupheleleyo lokuhamba ngentaba. Okwangoku, kukhethwe ngokufanelekileyo kwisithethi esihambelana neBluetooth ukusuka kuphawu oludumileyo.
Thenga iBose Soundlink Micro kwiAmazon.com
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezili-12
Ixesha lento efikelelekayo enokunika isandi esinamandla ngakumbi. Ngokungafaniyo nezithethi ezincinci, le yenzelwe amaqela asekhaya engqondweni. Inika isandi esinee-360-degrees, siphucule amandla e-bass kunye nokukhanya kwiziseko. Unokudibanisa amashumi ezithethi zeFlare 2 ukwenza amava ahambelana nalawo omculo. Ubomi bebhetri bukufutshane xa kufikwa kwizithethi zeBluetooth zeso sayizi, kodwa iyakukufumana ebusuku akukho ngxaki.
Thenga iAnker Soundcore Flare 2 kwiAmazon.com
Izithethi zeBluetooth ukusuka kwi- $ 100 ukuya kwi- $ 200
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezili-15
I-UE Boom 3 lolunye ukhetho olukhulu olungangeni manzi kunye nolothusayo. I-UE ibeka izithethi zayo kuvavanyo oluqatha ungayithatha naphina ngaphandle kokukhathazeka kakhulu. Ngeli xesha ngaphambili, izithethi ze-UE Boom zazinenkxaso yeAmazon & apos; s Ilizwi lomncedisi welizwi, ngoku irhoxisiwe kwaye esi sisisithethi esiqhelekileyo esijolise kumgangatho ophezulu wesandi, ngaphandle kwemiyalelo yomncedisi okrelekrele. Ngokomgangatho wesandi, i-UE Boom 3 ibalasele, iphakame kakhulu kwaye iphakathi, kunye nesandi esinamandla ngokumangalisayo sobungakanani bayo.
Thenga i-UE Boom 3 kwiAmazon.com
I-JBL Flip 5 kulapho umgangatho omkhulu wesandi, uyilo olupholileyo kunye namaxabiso afikelelekayo adibana. Luhlobo lwesithethi wena & apos; ukuba neqhayiya ngokukhupha ubhaka wakho kwaye udlalele abahlobo bakho umculo. Ngokungafaniyo nezinye izithethi, iFlip 5 iza nohlobo C lokutshaja izibuko, oko kuthetha ukuba awudingi ukuphatha ikhebula eyongezelelweyo kwaye unokusebenzisa iselfowuni nefowuni yakho (ngaphandle kokuba yi-iPhone, kunjalo). Kukwazomelele njengokona kulungileyo kubo. Ubomi bebhetri bulungile kodwa abukho phakathi kwezona zinto zilungileyo kwaye ngokungafaniyo neFlip 4 (ekwalungile, ebiza ixabiso elincinci) ayinakusetyenziselwa iifowuni.
Thenga iJBL Flip 5 kwiAmazon.com
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezili-12Ngoku nantsi into yabasebenzisi behlabathi be-iPhone. Ewe, iPilisi yeBeats + inokudityaniswa neefowuni ze-Android nayo, kodwa ihlawulisa ngentambo yombane eyenza ukuba ibe lula ngakumbi kuloo nxalenye ye-Apple ecosystem. Ipilisi + ipakisha i-punch ngaphandle kokuyilwa kwayo. Isandi sikhwaza kwaye sicacile kwaye kukho ii-apos; nakwisixa esifanelekileyo seebhasi zokuhamba nayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, awunyanzelekanga ukuba uhlawule ipremiyamu ephezulu yale Beats, ixabiso lePilisi + lihambelana nezinye iimveliso ezikudidi lwayo.
Thenga iPilisi yeBeats + kwiAmazon.com
IBose SoundLink Mini II
I-Bose SoundLink Mini 2 inokuba nembonakalo ephelelwe lixesha kuzo zonke, kodwa inesandi esomeleleyo somgangatho obetha i-JBL Charge 3 kunye ne-UE Boom 3 ngompu omde. Inesandi esivulekileyo sesandi, esinesandi esichazwe ngcono kuzo zombini iindawo eziphakamileyo kunye nezisezantsi, kwaye inevolumu eyaneleyo yokugcwalisa igumbi kakuhle. Kuvakala kufanelekile, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ubungakanani bayo obuncinci. Ngelishwa, ayinguye olona qabane lilungileyo kwimisebenzi yakho yangaphandle njengoko kusilela ireyithingi ye-IP.
Thenga iBose SoundLink Mini II kwi-Amazon.com
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezingama-20
I-UE Megaboom 3 sesona sithethi sithandwayo sikhulu seBluetooth phaya kwaye ngesizathu esivakalayo: kuqhuma isandi esinamandla esingama-360-degree, kuvumela ukudibanisa izithethi ezibini ukuba zikhule ngakumbi kwaye kunodibaniso oluqinileyo lwerwala onokulugcina kwimigama ukuya kuthi ga kwi-150 yeenyawo. Ukuba iBoom 3 yesiqhelo ayifanelekanga kwiinjongo zakho emva koko iMegaboom 3 iya kuba nakho ukuhambisa.
Thenga i-UE Megaboom 3 kwiAmazon.com
Izithethi zeBluetooth ezingaphezulu kwe- $ 200
UMarshall Kilburn II
Ubomi bebhetri: iiyure ezingama-20 +
UMarshall Kilburn okhangeleka enesitayile uya kujongeka mkhulu nakweliphi na ikhaya elinoyilo olubonakalayo lukaMarshall. Kodwa ayisiyiyo nje malunga nesibheno esibonakalayo njengoko ikwaqhayisa ngesiphumo esicacileyo nesivakalisayo nesiza kuthi sanelise abathandi bomculo. Kwaye ngelixa inkulu kwaye inzima kunezinye izithethi ezikuluhlu, inayo umtya wokuhamba nayo ukuze ukwazi ukuthatha amava omculo wakho weprimiyamu naphi na kwaye wonwabele ngaphezulu kweeyure ezingama-20. Ithegi yexabiso linyathelo elingaphezulu kwento esiyijongileyo ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ukuba ikuko kuhlahlo-lwabiwo mali, awuzukuzisola ngokufumana i-Kilburn II.
Thenga uMarshall Kilburn II kwiAmazon.com
Ubomi bebhetri: Ukufikelela kwiiyure ezingama-24
Nge-boomy bass kunye nomgangatho opheleleyo wesandi, i-JBL Boombox 2 yenye yesithethi esikhulu seBluetooth. Zonke izithethi ezikolu luhlu zinokusetyenziselwa iqela elingaphandle kodwa iBoombox 2 yeyona kuphela inokuyenza ngaphandle kokuncitshiswa. Ukuyicima, unokusebenzisa esi sithethi kunye ne-apos; s 10,000mAh ibhetri njengebhanki yamandla ukuhlawulisa ifowuni yakho xa usendleleni.
Thenga i-JBL Boombox 2 kwiAmazon.com
I-Sonos Move iya kulizalisa igumbi lakho okanye igadi yakho ngesandi esikhulu nesilungeleleneyo esiza kuchukumisa iindwendwe zakho. Izithethe zenkampani kubuchwephesha bomsindo ziye zaguqulela ngokukuko kwesi sithethi seBluetooth kwaye ngelixa isiza nexabiso eliphakamileyo, ikwanokunikezela okuninzi. Uyilo olucocekileyo luya kulifanela naliphi na igumbi lokuhlala ngoku kwaye ukuba uyayifuna kwenye indawo, yithathe kwindawo yokutshaja uyibeke naphi na apho uziva khona.
Thenga i-Sonos Hambisa kwiAmazon.com
Kutheni le nto iSuper Mario Run yayiyiflop kwaye kufuneka siyibonile isiza
I-iPhone 11 Pro kunye nePro Max yokutshaja ngokukhawuleza kuvavanywa: yenza umahluko omkhulu!
Ungazicoca njani zonke izaziso kwi-iOS 11 (isifundo se-iPhone 8)
Imidlalo yeentshukumo ezi-5 ezinje ngeCall of Duty ye-Android kunye ne-iOS
Ukuhamba Abafileyo: Ilizwe lethu lenza amatyala alo kwi-Android nakwi-iOS